Date My Pet » 10 Nzira To Create A Bodacious Bachelorette Pad!
Last updated: Jan. 26 2021 | 2 Maminitsi verenga
"Hapana nzvimbo yakaita musha."—Wizard pamusoro Oz
Ungave nomumwe paIndaneti, Akareba, kana tiri pachivande achinyatsotaurira muhofisi dzorudo, "Marongero" pakupedzisira rudo rwenyu nyaya kuchaitika panzvimbo yako.
Uye kufanana kana kwete, furati yako, musha, kana shack, anotaura zvakawanda pamusoro pezvauri uye Zvauri. Kufanana pezvokupfeka, izvozvo anotaura zvakawanda pamusoro unhu hwako uye mararamiro.
Ko zvako kutaura pamusoro pako?
Kana uchida zvako kutaura uri muchato zvinhu, kana zvishoma munhu akakodzera yakarembera anobuda uye nokuzivana nani, funga rakakodzera Mazano aya.
Decorating DO'S Nezvokusaita
1. Ko kuti nzvimbo yako yakasiyana nedzimwe, Kufungisisa inonakidza ndiani muri.
Kana zviri whimsical, sezvechinyakare, kana vakashinga uye bodacious, akaisa yako kuruka pamusoro payo.
Ndicho runako nokuva kwako nzvimbo: dzako nzvimbo, kuravira yako!
Ona chii unogona kukwira. Edza tichienzanisa mavara akasiyana, zvitayera, textures, uye kunyange nguva. In kwokutanga matanho, regai yakawanda mari kusvikira wava nechokwadi chei chinokodzera unhu hwako uye mararamiro.
3. Funga wepfungwa mavara.
Ko munoziva kuti vamwe hues ine zvainoita sei uchinzwa uye kufunga imwe kamuri kana marongero? Semuyenzaniso, tsvukuruka napasi matauriro Mavara Anyarara; apo mavara akafanana tsvuku uye orenji vari achisimbisa. Mabhizimisi vanoshandisa ruvara kurapa dzose nguva mukubudisa zvimwe mhinduro zvandinenge. Unofanira Iwewo.
4. Chengeta ako kumativi akanaka zvakatsvinda.
amai vako zvakanaka. Haangooni tsika iyi inobatsira asika tionekwe zvakanaka nevakomana kana vasikana, zvazvinoita zvikuru kuchengetedza nguva nemari.
5. "Bloom apo uri chakasimwa."
Kuunza zvishoma zvakasikwa mumba munogara akachenjera Kutama. Plants kusika pave noushamwari uye nyaradzo. Vanobatsirawo kugovera mhepo hwakanaka. Kunyange kana usina kuzvarwa "munyoro gunwe,"Pane zvakasiyana-siyana zvinomera zvinoda shoma" kushambidzika "pane dzenyu dzinovaraidza. Clueless? Google "nyore kuwedzera miti" kana kushanyira yomunharaunda yako Garden Home dhepoti kuti dhipatimendi rubatsiro.
6. Funga pakawanda pakati matengu.
Ndinoda matengu! Iwe uchanakidzwawo. Havachina chipa, kwezva, uye nyore kuwana.
Kuzvishandisa nokuti okuchengetera: kuti abate dzinovaraidza zvokutambisa, matauro, CDS, flavoured teas, kana sezvo decoration unyanzvi zvidimbu akaisa sokuronga pamadziro. Sanganisa uye kunowirirana mavara akasiyana, hukuru uye micheka maitiro nokuti kunonyanyisa kushanda.
7. Inoikomba nezvinhu waunoda.
Kana uri mumhanzi anoda, zvingaratidza gitare kana Drum. Zvingava zvakanaka, decoration runotaura kuti "imba" mapikicha mhuri yako kana dzinovaraidza. Kana muchida kuenda, zvichida unogona kuratidza mifananidzo kure-kure nenzvimbo uye pose kana mbiri. Wedzera izvi, vamwe zvemiti inonhuhwirira makenduru, kana murunyararo tsime, nokuti akanaka okugadziridza kubatwa.
8. Musakanganwa yokurara uye kicheni.
Zviri apo vakaroorana vakawanda vanopedza chaizvo nguva kugoverana zvokudya, mafaro, uye pakusika Ndangariro inogara.
9. Shop pagungano siyana yokuitira zvakanaka zveefa.
Unogona zvibodzwa zvimwe zvinhu zvikuru panzvimbo dzakaita Dollar Family yenyu, yepamusoro kuchengetedza zvitoro, wakare rokutengesa uye misika nhata, uye kunyange Craigslist.
10. Iva nechokwadi kuti kutora usati uye pashure mifananidzo.
It 'achakupai pfungwa huru vabudirira uye mafaro, uye pfungwa dzinobatsira enhancements yemberi.
With patsime kuchenesa pamusoro jengachenga, hapana nguva nani kubvisa uye runako kukwira nzvimbo yako!